About us - Jiangyin Iverson Umhlobiso Material Co., Ltd.
Jiangyin Iverson I-Decoration Material Co, Ltd. yasungulwa ngo-2005. Kuyibhizinisi eliphelele elihlanganisa ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuhweba.
Izinkuni zepulasitiki ezihlanganisiwe (i-WPC), inhlanganisela yamatshe epulasitiki (i-SPC), i-homogenous PVC sheet flooring nezinye izinsimbi ezihlobene njll.
Ubungani bemveloy, uqine okungasheleli, ani-tibacterial and mildew-proof, waterproof and umswakama-proof, mncane futhi ulula, uvuseleleka ukumelana nokugqoka, ukumunca umsindo nokunciphisa umsindo, ukucisha umlilo nokulwa namalangabi, futhi yinhle futhi imfashini.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ku- home, ihotela，izibhedlela, izikole, izitolo ezinkulu, izinxanxathela zezitolo, izikhumulo zezindiza, izinkundla zezemidlalo nezinye izindawo.
Inkampani yethu ihlanganisa indawo ye- 16, 000 square metres anendawo yokusebenzela yanamuhla nendawo yokugcina impahla ehlanzekile. Sinemigqa emi-4 yokukhiqiza, kanye nonjiniyela abangongoti, abasebenzi abanekhono kanye neqembu lokuthengisa elinokuningi okungaphezu kwe-10 isipiliyoni seminyaka ku-laminate flooring. Amandla wonyaka wokukhiqiza yi5, 000,000 square metres ngokususelwa kumshini nobuchwepheshe obuthuthukisiwe.
"Yiba Serious, Thembeka, Environmental Ukuvikelwa, Ukuqanjwa Okuqhubekayo "kuhlala kungumqondo wenkampani yethu.
Sigcizelela iqembu lokwakha lobuchwepheshe, imishini esezingeni eliphakeme, izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme, inqubo yesayensi, ukulawulwa kwekhwalithi eqinile necebo lokumaketha eliphelele.
Sekuyiminyaka amakhasimende enethemba elikhulu enkampanini yethu ngenxa yekhwalithi yethu edume kakhulu, insizakalo enhle nokuphikelela ekwenzeni ibhizinisi ngokuvumelana nenkontileka nemithetho efanele.
Abasebenzi benkampani yethu banomoya omuhle weqembu, amakhono wokuxhumana nokuxhumanisa, basebenza kanzima futhi bangamelana nengcindezi yomsebenzi. Simncane, sinomdlandla, siyajabulisa, sinolwazi futhi siwusizo. Lapho wenza ibhizinisi nathi, akukho lutho ongeke uqiniseke ngalo.
Sihlose ukuhlinzeka ngekhwalithi egculisayo kanye namakhasimende ethu emhlabeni. Sithemba ukusungula ubudlelwano obuhle bebhizinisi nawo wonke amaklayenti ekhaya noma phesheya ukuthuthukisa izimakethe nokwenza ikusasa eliqhakazile. U-Iverson uhlala ebeka amakhasimende phambili futhi impela ungumlingani wakho onokwethenjelwa futhi othembekile.